လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် "ဆားဗီး Falcao". ကျွန်ုပ်တို့၏လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအချိန် မှစ. ယနေ့အထိလောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝ Story-
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ပညာရေး / အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း buildup စောစောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်မှလမ်း, etc ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, မိသားစုအသက်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်များမှထမြောက်ကပါဝင်ပတ်သက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုဥရောပဘောလုံးအတွက်အများဆုံးမှာပါတဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ဦးသို့သူ့ကိုလှည့်သည့်ရည်မှန်းချက်, တဦးတည်း၏ရှေ့၌သူ၏ဗီဇအတိုင်းအကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သော်ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေကသာလက်အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောလောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
လောနိတျမွို့ Jovic Bijeljina, ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား၏မြို့၌သူ၏မိခင်, Svetlana Jovic နှင့်ဖခင်မီလန် Jovic (တစ်ဦးဖြစ်သူဘောလုံးသမား) အားဒီဇင်ဘာလ 23 ၏ 1997rd နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
Jovic 14 မိုင်တောင်ဘက် Bijeljina ၏ဖြစ်သည့် Batar ၏ကျေးလက်ရွာ၌သူ၏မိဘများနှင့်အစ်မနှင့်အတူအလွန်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အိမ်မှာကြီးပြင်းလာတယ်။ မိမိဘွားခြင်းမပြုမီကသူ၏မိဘများနှင့်တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုဝင်များ Bijeljina, ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားအတွက်ဖြစ်ပျက်သောအစောပိုင်း 1990 ရဲ့ဒေါသနှင့်အာဏာသိမ်းမှုခံစားခဲ့ရသည်။
လောနိတျမွို့Jovićမိသားစုနှင့်တစ်ကြိမ်အစောပိုင်း 1990 ရဲ့, ပြစ်မှားသောအပြစ်ခံစားခဲ့ရသူချင်းတိုင်းပြည်ကလူ။
ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား၏ဤမတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုသာယာဝပြောတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိခြင်းနှင့်လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့အဖေ၏လက်ခံရရှိအဆုံးမှာခဲ့ထံမှဘောလုံးသမားများတားဆီး။ ဝမ်းနည်းစရာမီလန် Jovic သာမိမိအိမ်သူအိမ်သားအဘို့အနည်းငယ်သာဝင်ငွေကိုကမ်းလှမ်းရာ Partizan ဘဲဂရိတ်နှင့်အတူအပျော်တမ်းဘောလုံးကစားရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။
တက်ကြီးထွားလာမရှိကစားစရာသို့မဟုတ်ကစားနည်းများ, Jovic ကန်နှင့်သူ၏အဖေနှင့်အတူကစားထားတဲ့ရုံဘောလုံးရှိခဲ့သည်။ မိမိအနှေးကွေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ချိန်ချိန်လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့အဖေမီလန်သူ့သားမှတဆင့်သူ့အိပ်မက်နေထိုင်နေဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
တစ်ဦးဘောလုံး-မတ်ေတာရှိတဲ့အဖေနှင့်တစ်ဦးအထောက်အကူမိခင်ရှိခြင်း, ကအမြဲကသူ့အဖေနှင့်အတူ outings ရှိခြင်းကိုတှေ့မွငျခဲ့သူလူငယ်တစ်ယောက်လောနိတျမွို့ Jovic အတွက်သွတ်သွင်းပေးခဲ့ကြတယ်ခံရဖို့လှပတဲ့ဂိမ်း၏မတ်ေတာအတှကျသာကိုသဘာဝဖြစ်ခဲ့သည်။ မီလန်သူ့ကိုသူ၏အမွငျရသောအိပ်မက်နထေိုငျဆက်လက်ကူညီပေးနေ၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်အတူဘောလုံးပညာရေးကိုအာရုံစိုက်ဖို့သူ့သားအားပေးခဲ့တယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic- ပညာရေးနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup ။ IG မှအကြွေး
လောနိတျမွို့ Jovic5အတွက် 2002 ၏အသက်အရွယ်မှာဂိမ်းမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, ဘောလုံးများအတွက်တစ်နှစ်ကသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းအားမိမိပညာရေးကျေးဇူးတင်စကားအလျှော့ကိုမြင်တော်မူ၏။
2004 မှာတော့ကံကောင်းလောနိတျမွို့အောင်မြင်တဲ့စမ်းသပ်မှုဟာဂုဏ်သတင်း၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုတ်မြစ်ချနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက် mini ကိုမက်စ်i။ ဤသည်4နှင့် 12 နှစ်ကြားကလေးတွေကိုအဘို့ဘဲဂရိတ်အတွက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလိဂ်။ သူ၏ပထမဦးဆုံးဂိမ်းရှိသည်ဖို့ခရီးသွားလာခြင်းမပြုမီ, Jovic အဖေကိုဘယ်လိုနှစ်ဦးစလုံးခြေနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်သူ့ကိုသင်ပေးတယ်။ Jovic ပိုင်းတွင်လက်ျာခြေမမျက်နှာသာပေမယ့်, သို့သော်သူသည်သူ၏လက်ဝဲဘက်နှင့်အတူနည်းတူစိတ်ချလက်ချဘောလုံးကိုထိမှသိခဲ့ရတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့အခွက်တဆယ်ပရီးမီးယားလိဂ်သို့မိမိအကအရမ်းပထမဦးဆုံးဂိမ်းကနေထင်ရှားညာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… သူသည်သူ၏ပထမဆုံးဂိမ်းအတွက်ပိုပြီးရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းမိမိသားကိုအားပေးအားမိမိအဖေမှငွေသားကမ်းလှမ်းရန်အပေါင်ခံကလပ်ရဲ့ဒါရိုက်တာမြင်သောတစ်ဦးလုပ်ရပ်တစ်ခုဟက်ထရစ်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
မီလန် Jovic သူ၏သားကိုသွင်းယူတစ်ဦးချင်းစီရည်မှန်းချက်များအတွက်€ 50 ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်။ သူလည်းသူဘဲဂရိတ်မှမိမိတို့၏နေအိမ်ရွာကနေလောနိတျမွို့သို့ဆောင်ခဲ့အတွက်မြှုတ်ပေးသော 2000 dinars ၏ကုန်ကျစရိတ်များခရီးသွားလာပေးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ့သားဟာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးကစားသမားအဖြစ်ယူဆသောကြောင့်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ပြုမိခဲ့သည်။
သူကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် banged ဘယ်မှာ Jovic ရဲ့ဂိမ်းထဲကတစ်ခုမှာသူဟာနီစတားဘဲဂရိတ်နှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူ Tomas Milićevićတစ်နီစတားရဲ့ကင်းထောက်ခြင်းဖြင့် scouted တယ်။ လောနိတျမွို့ Jovic ပျံသန်းသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူအောင်မြင်ပြီးသူသည်ကလပ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အောက်ကကလပ်ရဲ့အရောင်အထံတော်၌ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ကလပ်ပူးပေါင်းမီ, Jovic ရဲ့အဖေတစ်ချိန်က Partizan, သူတို့ကိုJovićလက်မှတ်ထိုးရန်အဘို့အသူစည်းရုံးတိုက်တွန်းခဲ့သောသူသည်ကစားကလပ်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ပေးဖို့သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ Partizan သူတို့နှင့်အတူဆော့ကစားရန်သူ့သားလောနိတျမွို့ Jovic များအတွက်တစ်လလျှင်မီလန် 200 ယူရိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားနှင့်သူ့ကလေးလေးနီစတားနှင့်အတူနေရန်သွားခဲ့ပါသည်အပေါ်အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame ပုံပြင်မှလမ်း
Jovićလူငယ်အသင်းများအတွက်ထွန်းလင်းဆက်လက်လျင်မြန်စွာအနာဂတျအတှကျတစ် wonderkid အဖြစ်မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့တက်ကြီးထွားလာသူအီဘရာနှင့်ဖယ်လ်ကာအို idolizing စတင်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… Jovic တစ်ချိန်ကသူ၏ Facebook ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်မိမိအပြီးကွင်းခတ်၌သူ၏ရုပ်တုကိုလုပ်သောများ၏အမည်များရေးသားခဲ့သည်။
28 မေလ 2014 တွင်, 16 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်မှာ Jovic နီစတားနဲ့သူ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ အစောပိုင်းအပေါ်သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘသို့သူဟာကလပ်ရဲ့သမိုင်းတစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင်ပွဲစဉ်အတွက်အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းအဖြစ် Dejan Stankovićရဲ့စံချိန်ကိုဖဲ့။
Fame ပုံပြင်မှလောနိတျမွို့ Jovic လမ်း။ RedStar နှင့် IG မှအကြွေး
ဤသည်အထင်ကြီး feat သည်သူ၏လက်မှတ်ထွက်ရှာနေအားလုံးဥရောပကျော်ကလပ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ Jovic အသစ်သောကျက်စားရာအရပ်မှအပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးကဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2016 ၏ဖေဖော်ဝါရီလသို့ရောက်ကြ၏။ အဆိုပါ 18 နှစ်အရွယ်ဘောလုံးကြယ်ပွင့်ကသူပေါ်တူဂီကုမ္ပဏီကြီးဘင်ဖီကာပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဓိကပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်။
Jovic ဘင်ဖီကာ၌ရှိ၏နေစဉ်, Jovićရဲ့စာချုပ်, ထိုလုလင်သည်ကြယ်ပွင့် demoralized ထားတဲ့သတင်းကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအတွက်မရေအကျိုးစီးပွားထိတွေ့ထားတဲ့ဘောလုံးယိုခြင်းဖြင့်အစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဖ Jovic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် stagnate မှစတင်ခဲ့ပြီးဒီငယ်ရွယ်ဘောလုံးသမားများအတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲအများကြီးစေ၏။
Fame Story- ဖို့လောနိတျမွို့ Jovic လမ်းမကြီးဟာသွားခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်အခါ။ IG မှအကြွေး
Jovic ပြောပါတယ် Breakingthelines အစီရင်ခံစာ။ တစ်ချိန်ကနီစတားမှာပထမဦးဆုံး-ရွေးချယ်မှုစံချိန်အနိုင်အထက်ထံမှထွက်သွားသူဆားဗီးရှေ့ဆက်ရှေးလာလီဂါအတွက်ဘင်ဖီကာ B ကိုအဘို့ကစားရန် demoted တဲ့ကိုယ်တော်တိုင်မြင်တော်မူ၏။
နီးပါးဥရောပ၌မေ့လျော့ခံရပြီးနောက်တဦးတည်းကလပ်ဆားဗီးယနျးဘို့မိမိတို့ဆက်လက်တောင်းဆိုမှုကို၌ရပ်နေကြ၏။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့သည်သူ၏ဘင်ဖီကာစာလုံးပေါင်း၏အိပ်မက်ဆိုးကနေJovićသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကိုဂျာမန်ကလပ် Eintracht Frankfurt ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကလပ်ချေးငွေအပေါ်သူ့ကိုလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိမိအစာချုပ်အမြဲတမ်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame ပုံပြင်မှထလော့
ဂျာမနီမှာနေတဲ့ scintillating ဒုတိယရာသီပြီးနောက်, stocky နှင့်အမြန်ရှေ့ဆက်သည်သူ၏ပုံစံကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နှင့် Eintracht Frankfurt ပထမဦးဆုံးအသင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ Jovic နှစ်ဦးစလုံးခြေနှင့် crisply ဘောလုံးကိုရိုက်သူကိုတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကလှပသောရည်မှန်းချက်များနှင့်အလွန်ကြီးမားသောအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပယူဆောင်လာပေးသောအချိန်ကိုက်တပါးတစ်ခုပင်အသိနှင့်အတူမင်္ဂလာဖြစ်လာခဲ့သည်။
လောနိတျမွို့Jović Fame ပုံပြင်မှထလော့။ Playingfor90 မှအကြွေး
Jovic သူ့ကိုဥရောပအတွက်အပူဆုံးနှင့်အသက်အငယ်ဆုံးဂုဏ်သတ္တိများ၏ဖြစ်လာဖန်ဆင်းသောထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့ဥက္ကာမြင့်တက်ကြံ့ကြံ့ခံ။ T ကသူသည်မိမိအလူသားသည်တံခါးဝခေါက် Real Madrid အသင်းသူဆားဗီးရှေ့ဆက်အစဉ်အဆက်ဓာတ်ငွေ့ခြေနင်းကိုချွတ်သည်သူ၏ခြေလျင်ယူဖို့အဆင်သင့်မြင့်အားကြီးသောဖြစ်လာစေရန်နှင့်မထားပါဘူး။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
ကျော်ကြားမှုမှ Jovic ရဲ့မြင့်တက်မှုနှင့်အတူသူ၏ပရိတ်သတ်များဧကန်အမှန်မီးလောငျသညျ့မေးခှနျးကိုမေးမယ်လို့အချို့ဖြစ်ပါတယ်။ လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့ရည်းစား, ဇနီးသို့မဟုတ်အချို့ကိုဖျားခါခေါ်လိမ့်မယ်အဖြစ်သူကားအဘယ်သူ ?.
လောနိတျမွို့ Jovic နီစတားဘဲဂရိတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဘလက်ထက် မှစ. Andjela Manitasevic နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူတို့၏အစောပိုင်းကြားဆက်ဆံရေးနှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ငှက်ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမရေမတွက်အချက်အလက် Life- လောနိတျမွို့ Jovic ဆက်ဆံရေး
သူတို့ရဲ့အထက်ဓါတ်ပုံနဲ့အောက်ကတဦးတည်းအနေဖြင့်တရားစီရငျသောကြောင့် Andjela Manitasevic သူမ၏လူထက်အသက်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိသာသည်။ ဂရုမစိုက်ဘူး!! ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာအရေးကြီးပါတယ်နှင့်အသက်အရွယ်မယ့်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Andjela Manitasevic နှင့်လောနိတျမွို့ Jovic
လောနိတျမွို့ Jovic ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာသူနဲ့သူ့ရည်းစား Andjela Manitasevic နှစ်ဦးစလုံး၏ escapades ချွတ်ဖေါ်ပြခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။ တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, နှစ်ဦးစလုံးချစ်ကြည်ရေးပေါ်တွင်တည်ဆောက်သောအစိုင်အခဲဆကျဆံရေး။
Andjela Manitasevic နှင့်လောနိတျမွို့ Jovic အရည်အသွေးကိုအချိန်တနေရာရှိသည်ဖို့ကိုချစ်သောသူ
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ချွတ်စတင်ကာ Jovic တစ်ပွင့်လင်းစိတ်ထဲရှိပါတယ်။ သူကအရမ်းအကောင်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်အားထက်သန်နှင့်အပြောင်းအလဲများကို likes ။ Jovic ကွန်ကရစ်လုပ်ရပ်များသို့သူ၏အကြံအစည်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်နှင့်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ဘာမှလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
LifeBogger မှာပဲကျနော်တို့တူသောဘောလုံးကစားသမားကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုချစ်ပြီးလောနိတျမွို့ Jovic ကိုယ်တော်တိုင်တစ်ခုချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ တောင်မှသင်သည်ထိုအရပ်၌ဟုလည်းမရှိ ခေတ်သစ်ဂိမ်းထဲမှာမကျန်သစ္စာရှိမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကောင့်သို့ Jovic, သူ့ခွေးနှင့်မျောက်အကြားမျှဝေဆက်ဆံရေးကိုယူမထားဘူး။
လောနိတျမွို့ Jovic ကိုယ်ပိုင်ဘဝကအချက်အလက်
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဘဝ
Jovic စာသားသူတစ်ဦးသန်းကြွယ်သူဌေးဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက£ 49.50 မီတာမှာတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့်မှတရားစီရငျသူမြေနှင့်ရေပေါ်မှာဇိမ်ခံခရီးစဉ်နှစ်ခုလုံးရှိခြင်းသည်သူ၏ Moni သုံးစွဲတဲ့သူဘောလုံးသမားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic လူနေမှုပုံစံ
Jovic သို့သော်တော်တော်အထင်ကြီးကားများ, အရက်များခြင်း, swagger နှင့်မိန်းကလေးများလက်တဆုပ်စာအားဖြင့်သိသာမဟုတ်ပါဘူး။ သူကအသက်တာကိုသူတို့ရှုထောင့်အပေါ်သူ၏ Moni စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စမတ်သည်။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့မိသားစုမူလအစနှင့် ပတ်သက်. ပြောရလျှင်သူတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီးတဦးတည်းသောခြောက်လသမ္မတနိုင်ငံသို့ချိုးဖဲ့ပြီးနောက်အရာယူဂိုဆလားဗီးယားကနေသူတို့ရဲ့အမြစ်များရှိ ဘော့စနီးယား နှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား။ 1975 တှငျမှေးဖှားလောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့အဖေမီလန်, ဆားဘီးယားတည်ရှိသော Partizan ဘောလုံးကလပ်၏ဟောင်းတစ်ဦးဘယ်ဖက်-တောင်ပံဖြစ်ခဲ့သည်။
လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့ dad- မီလန်Jović။ Nostalgija
သူ့သားလောနိတျမွို့မတူဘဲ, မီလန်သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အများအပြားကောင်းသောအထွဋ်အောင်မြင်တာပါ။ သူသာ 82 2000 ၌သူ၏ဖိနပ်ကိုတက်ဆွဲထားရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင် 2003 အတွက်ရုရှားပရီးမီးယားလိဂ်အနိုင်ရသည်သူ၏အကြီးတန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကိုက်ညီခဲ့သည်။
မီလန် Jovic နှင့်သူ၏ဇနီး Svetlana ဘောလုံးကွင်းကနေသူ့သားရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ရှိနေသော်လည်းဆားဘီးယားအတွက်လူလတ်တန်းစားဘဝအသကျရှငျကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သည့်အခါဂျာမန်ဤအချက်အလက်သည် လာ. BILD သတင်းစာတစ်ချိန်ကဆားဘီးယားအတွက်လောနိတျမွို့ Jovics မိသားစုနေအိမ်များအတွက်သဲလွန်စရှာသွား၏။ သူတို့ကသူ့ဖခင်နှင့်၎င်းတို့၏လူလတ်တန်းစားမိသားစုက status ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့ခမညျးတျော -Papa မီလန်။ ခရက်ဒစ်မှ ရုပ်ပုံ
Blid အတူအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းမီလန် Jovic သူတစ်ချိန်ကသူ့သား၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်သူ၏ဇနီး Svetlana ပရိယာယ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အကြွေးကိုယ်တော်တိုင်တယ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ယနေ့ Jovic ရဲ့အဖေ, မိခင်, ညီမများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှစ်ဦးစလုံးဟာမိသားစုတစ်စု၏ဦးခေါင်းကနေယူအန္တရာယ်၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်ပါပြီ။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
မင်းသိလား?… နိုဝင်ဘာလ 2015 လောနိတျမွို့ Jovic ရဲ့မိသားစုများအတွက်ကြိုးစားနေတစ်လဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကသူ့ကို Moni ပေးဆောင်မပါဘူးဆိုရင်သူက "အလိုတခုတည်းသောမိသားစုလောနိတျမွို့ Jovic ခြိမ်းခြောက်တဲ့သူ Loznica (ဆားဘီးယားတစ်မြို့) ကနေရက်ကက်၏လက်မှခံစားခဲ့ရအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်မိမိအခြေထောက်များကိုချိုးဖျက်"။
လောနိတျမွို့ Jovic မရေမတွက်အချက်အလက်နဲ့။ YouTube နဲ့ IG မှ credit ။
မင်းသိလား?… လောနိတျမွို့ Jovic တစ်ချိန်ကဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားအတွက် Bijeljina သူ၏မွေးရပ်မြေအနီးမြို့Patkovača၌သူ၏မာစီးဒီးကားကိုအတူမတော်တဆမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ မတော်တဆမှုများတွင်လောနိတျမွို့Jovićဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းအချို့အမြန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပြီးတွင်ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
လောနိတျမွို့ Jovic တစ်ချိန်ကမတော်တဆမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်မှ Fenix.
မင်းသိလား?… Jovic ကသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတက်တူးထိုးသည်, မိမိတက်တူးထိုးဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအံ့သြပရိတ်သတ်တွေထားရှိမည်သည့်တဦးတည်းရှိပါတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic Tattoo အချက်အလက်
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ဆားဘီးယားအတွက်အများဆုံးဖြစ်သောသူ၏ခရစ်ယာန်သြသဒေါက်ဘာသာတရားကိုထင်ဟပ်ထားတဲ့ယေရှု၏ပုံတစ်ပုံနဲ့တူလှပါတယ်။ Jovic ပထမဦးဆုံးရုရှားနိုင်ငံအတွက် 2018 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်းဒီတက်တူးထိုးဖော်ပြခဲ့တယ်။
မင်းသိလား?… Jovic တစ်ခုတည်းဘွန်ဒစ်လီဂါဂိမ်းထဲမှာငါးဂိုးသွင်းဖို့အငယ်ဆုံးအစဉ်အဆက်ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကရောဘတ် Lewandoski အားဖြင့်ကျင်းပသည့်တစ်ဦးကစံချိန်။ အောက်တွင်တစ်ခုတည်းပွဲစဉ်၌သူ၏စံချိန်ချိုးငါးဂိုးဗီဒီယိုတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းချုပ်
အောက်တွင်ဒီပရိုဖိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုအကျဉ်းချုပ်ကိုရှာဖွေပါ။ ကြင်နာစွာ သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Subscribe ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန် Youtube ကို Channel ကို နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများသည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောနိတျမွို့ Jovic ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Hari Seferovic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မိုဟာမက် Salah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 12, 2020
ဗစ်တာ Lindelof ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဇန်နဝါရီ Oblak ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်